सडक छेउ खाना खाने सावित्राको पीडा – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/सडक छेउ खाना खाने सावित्राको पीडा
घाँटीमा सानो सल र आँखामा गाजल लगाएकी उनी असिनपसिन भएर खाँदै थिइन् । नजिकै गएर उनीसँग गफिन सुरुमा झस्किएको थिइन् । कुरा गर्न थालेपछि उनलाई खुल्न त्यति गाह्रो परेन ।
१४ वर्षीया उनी लकडाउन सुरु भएदेखि नै परिवारसँगै त्यहाँ खाना जाने गरेकी रहिछन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर छाक टार्ने उनको परिवार लकडाउनको सुरुवातका दिनमा जसोतसो भोक मेटेका थिए । लकडाउन लम्बिएसँगै उनको परिवारमा खाद्यान्‍नको अभाव हुन थालेपछि उनी आफ्‍ना बुवाआमासँग खाना खान आउन थालेकी रहिछन् ।
गीता र कोपिला पनि समूहसँगै खाना खाँदै थिइन् । आमा बुवा खोइ त ? भन्‍ने प्रश्‍नमा सावित्राले भातको गाँस मुखमा लाँदै भनिन् ‘अहिले उहाँहरु आउनुहुन्न ।’
उनीहरु आफैं आमा र बुवाका लागि त्यहीँबाट खान लगिदिन्थे । खाना खाएपछि सवित्राकी माइली बहिनी गीताले आमा र बुवाको लागि थालभरी खाना बोकिन् । त्यसै दिन आश्रमले खाना खानेहरुबीच घोषणा गर्‍यो, ‘आजदेखि हामी यहाँ खाना बाँड्दैनौं । तपाईँहरु संयमित भइदिनु भएको भए अझै खाना खुवाउँथ्यो । अब हामी अर्कै ठाउँमा खाना खुवाउँछौं । तपाईंहरुलाई हामी त्यतै बोलाउँछौं ।’
आश्रमलाई खाना बाँड्न सहयोग गर्दै आएका सुर्यविनायककै नीरज भट्टुले यस्तो घोषणा गरेपछि खाना खानेहरुको अनुहारमा निराशा छाएको थियो । सावित्रालाई पनि चिन्ता भयो । ‘अब भोलिदेखि कहाँ आउनु अंकल ?’ सावित्राले प्रश्न गरिन् । निरजको समूहले भोलि जानकारी दिने भन्दै सम्पर्क नम्बर बटुले । सावित्राले पनि आमाको नम्बर टिपाइन् । खासमा त्यहाँ खाना खान आउनेहरु विभिन्‍न निहुँमा झगडा गरेर होहल्ला मचाउन थालेपछि स्थानियले नै आश्रमलाई खाना खुवाउन बन्द गर्न लगाएका थिए । त्यसैले उनीहरुले खाना बाँड्ने काम बन्द गर्ने निर्णय गरेको भट्टुले सुनाए ।
नम्बर टिपाएर हामी लाग्यौं सावित्रा बस्ने कोठातिर । बाटोमा हिँड्दै गर्दा बहिनी कोपिलाले सावित्रालाई भन्दै थिइन्, ‘दिदी भोलिदेखि खान दिँदैनन् हो ? अब घरमै खाना बाँड्न आउँछन् हो अंकलहरु ?’ सावित्राले बहिनीको प्रश्नमा ‘हो’ मात्रै भनिदिइन् । करिब आधा घण्टा हिँडेपछि सावित्राको कोठा आइपुग्यो ।
आमा बुवाको काम पहिले झैं सुरु भए त्यो चुल्हो सजिलै बल्ने थियो । तर, लकडाउनले गर्दा सावित्राको आमा बुवाको काम अनिश्चित छ । अहिले त बल्ल तल्ल काम पाउँछन् । पहिला त ढलान गरेर उनको बुवा हजार त आमा सात सय भए कमाउँथें । अहिले काम अनिश्चित भएपछि खाना खान गाह्रो परेको सावित्राकी आमा सविताले सुनाइन् । ‘अहिले त गाह्रो छ । काम पनि पाउन गाह्रो, खान पनि गाह्रो ।’
आश्रमबाट फोन आउने आशमा थियो उनका परिवार । तर नयाँ ठाउँमा खाना खुवाउने घोषणा गरेयता आश्रमले सावित्राको आमाको नम्बरमा फोन गरेन । आक्कल झुक्कल पाउने कामकै भरमा उनीहरुको परिवारको पेट भर्दै आएको थियो । तर, अहिले त खानलाई नै धौधौ परेको सावित्राकी आमाले सुनाइन्,’चामल पनि सिद्धियो । कतै राहत दिइयो भने सम्पर्क गरिहाल्नु है !’
आयो अर्को खुशीको खबर: संक्रमित सबै निको भएर घर फर्केपछि कोरोनामुक्त भयो पाँचथर, सवै क्वारेन्टिनहरु खाली
नेपालमा शुक्रबार थप ७४० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या १५ हजार २५९ पुगेको छ ।